मेलिनाको मुल्याङकनमा नेपाली हिरो ~ The Nepal Romania
नेपाली हिरोमा राजेश हमाल मलाई सबभन्दा बौद्धिक र चरित्रवान लाग्छन् भने भुवन केसी अब्बल अभिनेता । दिलीप रायमाझी नृत्यमा पारंगत छन् । निखिल उप्रेती नम्र र शिष्ट छन् ।
मेलिना मानन्धर, कलाकार
दुई दशकदेखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा क्रियाशील छु । यस अवधिमा करिब पाँच दर्जन फिल्ममा अभिनय गरे । अभिनयका क्रममा नयाँ, पुराना गरी दर्जनभन्दा बढी नायकसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । मेरो पहिलो फिल्म थियो- पि्रयसी । ०४८ मा बनेको थियो, फिल्म । यसमा मेरा नायक थिए, किरणप्रताप केसी ।
त्यसपछि भुवन केसी, राजेश हमाल, शिव श्रेष्ठ हुँदै अहिलेका नयाँ हिरोहरू कर्मा शाक्य, नवीन श्रेष्ठसँग पनि काम गरेकी छु । यीमध्ये केहीसँगका अभिनय र संगत स्मरणयोग्य छन् भने केहीसँगका तीता । मान्छेका आ-आफ्नै स्वभावगत विशेषता हुन्छन् । सबैका गुण र अवगुण हुन्छन् ।
मैले जे-जति नायकसँग अभिनय गरेँ, भयानक प्रतिभाशाली र बिछट्टै सुन्दर कोही पनि लाग्दैन मलाई । र, असाध्यै कमजोर, खराब र कुरूप पनि कोही लाग्दैनन् । नेपाली फिल्म उद्योगमा यही हिरोचाहिँ 'मेरो आदर्श हिरो हो' भन्ने छैन । एउटा पाटोमा बलिया भएको हिरो अर्काे पाटोमा कमजोर हुन्छ । राम्रो अभिनय गर्न सक्नेले राम्रो डान्स गर्न सक्दैन । उता, डान्समा निपुण नायक अभिनयमा कमजोर हुन्छ ।
अभिनयका हिसाबले भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ र दिलीप रायमाझी मलाई अब्बल लाग्छन् । उनीहरूको अभिनय जीवन्त र स्वाभाविक हुन्छ । उनीहरूले अभिनय गरेको फिल्म हेर्दा फिल्म होइन, जीवनको यथार्थ भोगाइ हेरिरहेजस्तो लाग्छ । मलाई उनीहरूको अभिनय कुनै विदेशी सुपरस्टारको भन्दा कम जीवन्त लाग्दैन । उनीहरू राम्रा अभिनेता हुन् । मलाई लाग्छ- जीवन्त अभिनय कलाकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योग्यता हो र जोसँग यो योग्यता हुन्छ, ऊ फिल्म जगत्मा लामो समयसम्म टिक्न सक्छ ।
व्यक्तित्व र बौद्धिकताका दृष्टिले राजेश हमाल मलाई उत्कृष्ट लाग्छन् ।
सबै पक्षमा आफूलाई मेन्टेन गरिरहन सक्ने एक मात्र नेपाली हिरो हुन्, उनी　। अहिलेसम्म उनी त्यति ठूलो विवादमा मुछिएका पनि छैनन्　। उनको चारित्रिक पक्ष सबल छ　। उनलाई कुनै पनि नकारात्मक कुराका लागि कसैले औँला उठाएको मलाई थाहा छैन　। अरूले के भन्छन् ? वा अरू के गर्छन् ? भन्ने भन्दा पनि 'आफू के गर्छु' भन्नेमा उनी केन्दि्रत हुन्छन्　। उनका व्यवहार, बोली र प्रस्तुति एकदमै परिपक्व, शिष्ट र सभ्य छन्　। यति लामो समयसम्म फिल्म उद्योगमा एकछत्र राज गरिराख्नु चानचुने कुरा होइन　। उनीबाट नेपालका हिरोहरूले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्　। नेपाली फिल्म उद्योगमा मैले सबभन्दा सम्मान गर्ने हिरो हुन्, राजेश हमाल　। उनी असल मान्छे र असल अभिनेता हुन्　।
सौन्दर्यमा भुवन केसी, धीरेन शाक्य र लोकेन्द्र कार्की अब्बल लाग्छन्　। भुवन केसी अभिनयमा जति निपुण छन्, सौन्दर्यमा पनि उत्तिकै सम्पूर्ण छन्　। यही कारणले उनले सदाबहार हिरोको पहिचान बनाएका हुन्　। जति-जति उमेर ढल्किँदै गयो, उनी उति-उति जवान हुँदै गएझैँ लाग्छ　। व्यवहारका हिसाबले पनि भुवन असल छन्　। आफूभन्दा जुनियर कलाकारलाई कहिल्यै पनि यो जुनियर कलाकार हो भन्ने व्यवहार गर्दैनन्　। उनीहरूलाई पनि उत्तिकै आदर र प्रेम गर्छन्　। अर्को कुरा, उनीमा कामप्रतिको समर्पण एकदमै राम्रो छ　। सबै फिल्ममा उत्तिकै समर्पित भएर अभिनय गर्छन्　।
धीरेन शाक्यको त पहिचान नै ह्यान्डसम हिरोको छ　। उनको शारीरिक सुगठन र सुन्दरताबाट प्रभावित छु　। लोकेन्द्र कार्कीका त्यति धेरै फिल्म त हेरेकी छैन　। तर, उनको शारीरिक बनावट निकै राम्रो लाग्छ　।
नृत्यमा दिलीप रायमाझी अब्बल लाग्छन्, मलाई　। नेपाली हिरोहरूको कमजोर पाटो भनेको नृत्य पनि हो　। उनीहरूलाई नृत्य गर्न आउँदैन भनेर धेरै आलोचना गरिन्छ　। मेरो मूल्यांकनमा दिलीप मात्रै यस्तो हिरो हुन् जो नृत्यमा पारंगत छन्　। उनी सबैखाले नृत्य गर्न सक्छन्　। नृत्यमा मात्र होइन, अभिनयमा पनि उनी निपुण छन्　। हास्य अभिनयमा उनीजति जमेका नयाँ पुस्ताका हिरो कोही पनि छैनन्　।
निखिल उप्रेती, भुवन केसी, कर्मा शाक्य र विनय श्रेष्ठ एकदमै विनम्र शैलीमा बोल्ने हिरो हुन्　। उनीहरूको बोलीमा अभिमान र खस्रोपनको झल्को पाइँदैन　। सबैसँग सम्मानसाथ शिष्टतापूर्वक बोल्छन् उनीहरू　। अझ, निखिल उप्रेतीको बोल्ने शैली ज्यादै नम्र र भद्र छ　।
हरेक क्षेत्रमा असल र खराब मान्छे हुन्छन्　। फिल्म क्षेत्रमा पनि यस्ता केही हिरो छन्, जो, 'मै सबथोक हुँ, मबाहेक अरू कोही गतिला छैनन्' भन्ने खोक्रो घमण्ड लिएर बाँचेका छन्　। यस प्रवृत्तिका धेरै हिरो छन्, फिल्म उद्योगमा　। नायिकाहरूलाई खराब नजरले हेर्ने र दुव्र्यवहार गर्ने हिरो पनि छन्, यहाँ　। अभिनयकै क्रममा मलाई एक हिरोले खराब नियत राखेर पट्याउने कोसिस पनि गरेको थियो　। तर, उसलाई मैले शिष्टतापूर्वक सम्झाएर ठेगान लगाएको थिएँ　। यस्ता प्रवृत्ति भएका हिरोले नेपाली फिल्म उद्योगलाई बद्नाम गरेका छन्　। उनीहरूका कारण नायिकाहरूले तनाब व्यहोर्नुपर्छ　। यस्ता हिरोलाई म सधै घृणा गर्छु　।
केही हिरो र हिरोइनबीच द्वन्द्वका कारण पानी बाराबारको स्थिति भएको पनि सुनेकी छु　। तर, मेरो मामलामा भने यस्तो भएको छैन　। नराम्रो नियत राखेर प्रस्तुत हुनेहरूसँग म टाढै बसिदिन्छु　। त्यसैले, सतहमा आउनेगरी मेरो कुनै हिरोसँग द्वन्द्व या विवाद भएको छैन　।
हलिउड र बलिउडका हिरोहरूका तुलनमा नेपालका हिरो धेरै कुरामा कमजोर छन्　। तर, यसमा हिरोको कुनै दोष देख्दिनँ, म　। लगानीका हिसाबले नेपाली फिल्म क्षेत्र अत्यन्त कमजोर छ　। कमजोर लगानी भएपछि हिरोहरूले तन, मन र वचनले अभिनय गर्ने वातावरण हुदैन　। उनीहरू धेरैभन्दा धेरै फिल्ममा अभिनय गर्ने दाउमा हुन्छन्　। नेपाली कलाकारको बाध्यता हो, यो　। हतारमा गरिएको अभिनय लतर-पतर त हुनै नै भयो　। विदेशी फिल्ममा धेरै लगानी हुन्छ　। एउटै फिल्मबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन भएपछि त्यहाँका कलाकार तन, मन र वचनले काम गर्छन्　। र, अभिनय पनि राम्रो हुन्छ